ब्लड मनी तिर्न नसक्दा साउदी जेल पुगे ७ नेपाली ! - Arthatantra.com
ब्लड मनी तिर्न नसक्दा साउदी जेल पुगे ७ नेपाली !
काठमाण्डौं । धेरै कमाएर जीवन सुखी बनाउने सपना देख्दै साउदी अरब पुगेको सात नेपाली त्यहाँको जेलमा जीवनमरणकै दोसाँधमा छन्। सडक दुर्घटनामा ज्यान लिएको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका उनीहरु साउदी जेलमै जीवनको आशा पालेर बाँचिरहेका छन्।
भएका परिवारलाई ‘ब्लडमनी’ बुझाउन सके उनीहरुले अरु समय बाँच्न पाउँथे। जीवनको भिख मागे पनि राज्यले चासो दिएको छैन। बाँच्न पाइने आशा भने अझै मरिसकेको छैन उनीहरुमा। नेपाली साझा मञ्चका अनुसार दुर्घटनाका कारण मारिएका मृतकका परिवारमध्ये केहीले ब्ल्डमनी माफी दिँदा समेत पहल गरिदिने निकाय नहुँदा जेलमुक्त हुन पाएका छैनन्।
कतिपयले आफन्तमार्फत नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा हारगुहार गरेपनि सरकारी पक्षले चासो दिएको छैन। मञ्चले पीडितको तत्काल उद्धारका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै सबैबाट पीडितहरुको उद्धारमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ। सडक दुर्घटनामा बंगलादेशी नागरिकको मृत्युको कारक बनेका सुरेश मण्डल मृतकका परिवारले मागेको ५ लाख टाका ९६ लाख ८० हजार रुपैैयाँ० पनि तिर्न नसक्दा अलहमा जेलमा छन्। धनुषा पुष्पवलपुर १, रतनपुरका सञ्जीवकुमार यादव साढे दुई वर्षयता जेलमा छन्।
नागरिक दैनिक, २६ साउन २०७३, ८।००
वि.सं.२०७३ साउन २६ बुधवार ११:२२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे शिरीष गुरुङले रियो ओलम्किपमा राष्ट्रिय र्कीतिमान राखे !
पछिल्लाे चाडवाड नजिकिँदै गर्दा महंगिँदै सुनचाँदी, आज पनि बढ्यो !